Gurguraa: Maal isin gargaaru adde?
Maamilaa: Jakkeettiin barbaade. Tokko kan naaf ta'u jira?
Gurguraa: Lakkoofsa meeqa barbaadda?
Gurguraa: Bifa akkamii jaalatta?
Maamilaa: Gurraachan jaalladha.
Gurguraa: Isa kana ilaali.
Maamilaa: Sirritti natti ta'e. Gaatiin saa meeqa?
Gurguraa: Inni qarshii dhibba lama fi shantama.
Maamilaa: Inni dooqeen kun hoo?
Gurguraa: Wal qixxee dha.
Maamilaa: Inni diimaan sun meeqa?
Gurguraa: Inni sun qarshi dhibba lama qofa dha. Inni garu baayee isinitti guddata.
Maamilaa: Tole, isa kanan fudhadha.
Gender of AdjectivesEdit
Plural of AdjectivesEdit
Adjectives with PronounsEdit
Case and Definiteness Expressed by AdjectivesEdit